Ubuchwepheshe be-Ultrasonic Ukuxuba Amakhemisi - Hielscher Ultrasound Technology
I-ultrasonic lab homogenizers ivumela ukusheshisa nokusabalalisa okusheshayo nokuphumelelayo kwe-cremes, lotions, amafutha okugcoba, ukumiswa nokugcoba.
I-ultrasound yamandla iyindlela yokwethenjelwa enokwethenjelwa yemithi ephezulu yemithi
Ngenxa yamandla amakhulu okugcoba ama-cavitational, ukuxuba ama-ultrasonic kuzimfanelo ezivelele, ezihlukile kumkhiqizo.
Abadokotela kufanele bahlanganise, baxube, bahlanganise futhi bahlakaze ukwakheka okufanayo nsuku zonke ukulungiselela izidakamizwa ezihlanganisiwe kanye nezinketho ezenziwe ngezifiso. Ukuxuba ukuxuba kwezidakamizwa yi-pharmist onolwazi futhi kudinga ubuchwepheshe obufanelekayo be-homogenization. I-Ultrasound iyasebenza kakhulu uma kuziwa ekulungiseni umfaniswano, ubukhulu obuhle ukumiswa, emulsions noma dispersions.
Kungakhathaliseki ukuthi udinga ukwakha lotion olwenziwe ngokwezifiso noma i-tincture, ukusabalalisa iziqhumane ngokuzenzekelayo ngokuketshezi, noma ukukhipha amafutha noma amafutha emanzini asekelwe emanzini, i-homogenizers yethu ye-ultrasonic iyithuluzi elihle lemikhiqizo ephezulu yemithi yokwelapha.
amaphutha kanye nama-mousses
izithako ezisebenzayo zokwelapha (APIs)
I-homogenization ephansi noma ephakeme kakhulu nedivayisi efanayo
I-Ultrasound ingaba ithambile kakhulu futhi ilula noma inamandla kakhulu. Ungalungisa ukufakelwa kwamandla wama-lab ultrasonicators we-Hielscher ngokubeka amandla we-ultrasonic phakathi kwama-20% no-100% kuye ngokuthi ukuklama kwakho nokucubungula umgomo. Ngaphezu kwalokho, ungakhetha kusuka ezinhlobonhlobo ze-sonotrode (eyaziwa nangokuthi i-ultrasonic horn / probe) evumelekile ukuthi ivolumu izocutshungulwa. Idivayisi eyodwa ikunika inkululeko yezicelo eziningi!
Ukusebenzisa i-ultrasonics yokuhlanganiswa kwemithi kanye nokulungiselela amafutha okugcoba kanye nama-cremes kanye nokuqedwa kwama-powders noma amaphilisi kusindisa isikhathi esiningi. I-ultrasonic homogenization iyindlela elula, ephumelelayo neyasheshayo yamathuluzi wakho wezokwelapha.
Izinga eliphezulu lokuhlanzeka: ama-probe angenawo ama-autoclavable, ama-orifice afihlekile
Ukuphepha: ayikho izingxenye ezihambayo (ayikho ama-rotation blades)
Khetha idivayisi efanelekayo:
UP50H 50 W ifakwe ngesandla noma imisiwe 0.01 – 250 mL
UP100H I-100 W ifakwe ngesandla noma imisiwe 0.01 – 500 mL
UP200Ht 200 W ifakwe ngesandla noma imisiwe 0.1 – 1000 mL
UP200St 200 W imisiwe 0.1 – 1000 mL
UP400S 400 W imisiwe 5.0 – 2000 mL
I-homogenizer ye-ultrasonic UP400S